Iwo akanakisa madhiri evhiki paChishanu Chishanu | Linux Vakapindwa muropa
Iwo akanakisa madhiri evhiki yeChishanu Chishanu
El 2020 Nhema Chishanu Iri kuda kudonha, asi kuti urutse chishuwo chako, panotova nebhattoni yezvipenga zvinopihwa uye zvibvumirano zvinosvika pamberi. Muvhiki rese rino, iwe uchave uine zvakakosha kwazvo zvidzikiso pane akasiyana tech zvigadzirwa.
Iwe haufanire kuvapfuudza, sezvavari mukana wakanaka kutenga izvo zvaunoda, kuzvipa mubairo wegore rakaoma, uye kunyangwe kutenga zvipo zveKisimusi pamberi pemhuri / shamwari, uye nokudaro chengetedza huwandu hwakanaka hwemari ...
Heano mamwe e mhindu dzakanakisisa kuti iwe unogona kuvhima mukati mevhiki ino yeChishanu Chishanu. Ese iwo magajeti emagetsi awaida zvakanyanya, ikozvino pamutengo unodhura ...
Rangarira iwe uri zvibvumirano zvinoitika kamwe chete pagoreNaizvozvo, zvakakosha kuti iwe ugoita semhuka inovhima mhuka yayo kuitira kuti usarasikirwe nemitengo yezvigadzirwa zvetekinoroji zvinounza mazuva akapoteredza Chishanu Chishanu, zvese zvakapihwa zvakapfuura zvaunogona kutenga kubva svondo rino, kune izvo zvicha uya paCyber ​​Muvhuro.
2 Makomputa, zvemagetsi uye zvishongedzo
3 Nhare mbozha uye zvishongedzo
4 Imba yakanaka (imba otomatiki)
5 Maitiro ekuvhima machibvumirano paAmazon?
Amazon yakadzikisira zvigadzirwa zvavo kumitengo isingafungidzirwe. Kana iwe uchida kuzorodza ako akachenjera epamba zvigadzirwa, heano mamwe akanakisa:
Hwendefa Moto HD 8: yaimbodhura € 144.99, asi ikozvino unogona kuiwana kwe114.99 chete € pano. Iyo inonakidza 8 ″ inch piritsi, ine HD skrini, 64GB yekuchengetedza kwemukati (nekwanisi yekuikurisa kusvika ku1 TB ine microSD), uye isina kushambadzira. Iine yakasimba 2Ghz Quad-Core ARM Cortex processor, 2GB ye RAM, uye FireOS inoshanda sisitimu (yakavakirwa Android uye inowirirana nemaapps ako). Bhatiri rayo rinotora maawa gumi nemaviri ekushandisa, uye rinogona kubhadhariswa kuburikidza neUSB-C mumaawa asingasviki mashanu. Ehezve, uchibva kuAmazon, unenge uine masevhisi akabatanidzwa senge Prime Vhidhiyo, Prime Music, uye Prime Kuverenga, kushandisa yako piritsi kuona izvo zvemukati zvepamberi kuburikidza nekutenderera, teerera kumumhanzi, kana kuverenga paMhando ...
Kindle: isati yadhura € 89.99, ikozvino inogona kuve yako kwe64.99 chete € pano. Iyo yakakosha kuderedzwa kweiyo Amazon eBook muverengi. Kuve nemabhuku ako ese eMhando, pamwe nemamwe akawanda aunogona kuwedzera kubva kune zvimwe zvinyorwa (TXT, PDF, MOBI, DOC, HTML, Inonzwika, nezvimwewo). Iyo ine backlit skrini (4LED), 6 ″ anti-glare skrini, 167ppp resolution, 4GB kugona (+ kugona mugore), kuzvimiririra kusvika kumavhiki mana, uye kubatana kweWiFi. Muchidimbu, unogona kutakura zviuru zvemabhuku zvakachengetwa muchigadzirwa chimwe chete kuitira kuti zvikwanise kuperekedza iwe kwese kwaunoda zvine huremu hushoma ...
Moto TV Stick 4K: kubva ku € 59.99 kusvika chete 39.99 € apa, Ndicho chipo chinopihwa neAmazon paChishanu Chishanu. Nezvo, iwe unogona kushandura TV yako kuti ive smart TV, kana kupa yako smart TV nezvimwe zvekuwedzera kugona. Chishandiso chakanakisa kugona kuwana kuwanda kwemaapplication uye zvemultimedia zvemukati, kusefa pawebhu, nezvimwe. Uye zvakare, inosanganisira kure kure kutonga kwayo, kana iwe unogona zvakare kuisa maodha nemirairo yezwi nekuda kweiyo chaiyo mubatsiri Alexa iyo inosanganisirwa. Uye kana iwe uchida zvimwe, iwe unotoziva kare kuti Alexa inogona kuve nemabasa matsva kana iwe ukaisa humwe hunyanzvi.
Echo Ratidza 8: hauchazofaniri kubhadhara € 129.99, ikozvino Izvo zvinongodhura € 64.99 pano. Iyi Echo nyowani inowedzera skrini yekuwedzera kugona kweanowanzoitika maspika. Nayo, unogona kuva neyakafanana neyeye smart speaker ine Alexa, asi iyo 8 will HD skrini ichakubvumidzawo kukuratidza mhinduro kana izvo zvirimo pachiratidziri chako, tarisa zvirimo zvinoyerera, verenga nhau, tarisa mafoto emifananidzo chete ne kubvunza. Kumbira Alexa kuti ikuratidze mabikirwo paunenge uchiagadzirira, nezvimwe. Ne Alexa iwe unogona kudzora yako smart imba (mwenje mabumba, makamera, ...).
Echo Dot: kubva ku € 59.99 kusvika iyo 29.99 € izvozvi. Kana iwe uchida chimwe chinhu chakachipa pane iyo Echo Show, saka paChishanu Chishanu, iwe unogona kutarisira kune anotengesa-anotengesa smart speaker munyika. Iyo Amazon Echo ine Alexa ichave shamwari nyowani kune yako smart imba, iyo iwe yaunogona kuwana ruzivo nekungobvunza nezwi rako, kuteerera mimhanzi yako yaunofarira, kuisa maodha, kuseta zviyeuchidzo kana maalarm, nezvimwe. Kugona kwemubatsiri wako akawandisa ...
amazon eero: kubva ku € 279 yapfuura ingori 167.40 € pano, ndiko kuti, iwe uchachengetedza zvinopfuura € 111 pakutenga. Neichi chigadzirwa chitsva, iwe unozokwanisa kugadzira iyo WiFi mesh mune yako smart imba kana muhofisi yako. Ndokunge, iwo mesh yemasaini anodzokorora akapararira pamusoro penzvimbo yese (kusvika ku460 m²) kuitira kuti kufukidza kuve kunowanikwa mukona yega yega. Iyo paki inosanganisira 3 eero kugovera chero kwaunoda, asi iwe unogona kutenga zvimwe uye kuwedzera mesh. Uye zvakare, ine TrueMesh tekinoroji yekudzosera traffic uye kudzivirira kusangana.
Makomputa, zvemagetsi uye zvishongedzo
Kwete zvese zviri paAmazon paChishanu Chishanu, iwe zvakare une zvimwe zvakawanda zvigadzirwa kubva komputa uye zvemagetsi pamaoko ako, uye nemitengo isinganyatsoitika:
Cecotec Bongo Series A: kubva ku € 399 pa € 359 ikozvino. Sikuta yemagetsi ine simba rinokwana 700W, inokwira kukwira zvikomo uye inosvika pakumhanya kwakanyanya kunosvika makumi maviri neshanu km / h. Bhatiri rayo rine huwandu hweanosvika makumi matatu nemashanu km. Yayo nhare mbozha inokutendera kuti ubatanidze kune iyo sikuta uye uve nehukuru hwehumwe ruzivo Ino zvakare ine yakasimba 25-inch isina tambo mavhiri ane anti-blowout system, katatu chengetedzo braking system ine disc brake, magetsi uye manyore, 35 kutyaira modes (Eco yekuchengetedza, Nyaradzo yekutyaira kwakachengeteka, Mutambo wepamusoro kuita) uye pane-bhodhi komputa . Uye kana iwe uchida kuitora mukati mezvivakwa, pane yeruzhinji mota, kana kuichengeta, inopetwa ...
SoundPEATS: kubva € 49.99 kusvika € 34.99 m kuchengetedza € 15, ndiko kuti, 30%. Chipo chinoshamisa cheaya akakwira epamusoro emhando yepamusoro mahedhifoni, neBluetooth 5.0 tekinoroji, ruzha rwekudzima ruzha, maikorofoni yakasanganiswa yemafoni akajeka, mahegi akasununguka, maawa makumi matatu ekuzvimiririra uye USB-C kuchaja kubva mubhokisi rayo.
LG 55NANO806NA: Smart TV iyo yapfuura kubva pa € ​​809 ingori 594.99 € panondiko kuti, iwe uchachengetedza € 214 pakutenga, 26%. Chibvumirano! Iyo Smart TV kubva kune yakakurumbira LG yakasimba, iine imwe yemapaneru akanakisa. Icho chigadzirwa chitsva muna2020, ine tekinoroji yeNanoCell, isina mwenje inokuvadza yeziso, nerutsigiro rwe4K, HDR10 uye HLG, Ultra Surround Sound, Artificial Intelligence yekuvandudza mhando yemifananidzo, QuadCore processor, uye WebOS 5.0 inoshanda system ine vanhu vazhinji yemapurogiramu aripo. Inopa simba uye ine USB, HDMI, zviteshi zveWiFi, ...
HP LaserJet Pro MFP M283FDW: haufanire kukwiza maziso ako, uine 36% dhisikaundi, yabva pa € ​​470.99 kuenda € 299 ikozvino svondo rino. Chikwata chehunyanzvi icho iwe chaunogona kuwana kune uyu mutengo wekutenga. Iyo multifunction iyo inokwanisa kudhinda, kuteedzera, kuongorora uye kutumira fax. Iine HP Auto-On / Off tekinoroji yekuchengetedza magetsi, iine color touch screen ye manejimendi, uye USB chiteshi chekudhinda zvakananga / kushanda pakuvheneka kwependrive. Uye zvakare, iri ruvara laser tekinoroji, kupurinda yakakwira basa mitoro pakupisa kumhanya (21 ppm) ...
Logitech G29: kubva € 399.99 kusvika € 199, unoisa € 200 !!!! Gumbo remitambo raunogona kushandisa nemitambo yako yevhidhiyo yaunofarira. Iri vhiringi rekufananidza kumhanya uye kutyaira, rine matako uye mapaduru emagiya, pamwe nemabhatani emabasa akawanda anogadziriswa, ine Force Feedback, uye kuenderana kwePC, Mac, PlayStation uye Xbox. Nayo, yako simulation mitambo yemavhidhiyo ichave iri yechokwadi, kugona kutyaira mota mune yakasarudzika nzira. Unogona kuishandisa neakawanda eSteam mitambo yemavhidhiyo yeLinux natively (kana naProton), kubva kuFarm Simulator, kuenda kuF1, DIRT, uye zvimwe zvakawanda. Kunyangwe isinga tsanangure rutsigiro rweLinux, inogona kushanda zvakakwana. Muchokwadi, mune ino blog tinotaura nezvayo pyLinuxWheel uye Overstreet zverudzi urwu rwekutonga. Uye, kana iwe uchirangarira, pakati pemamodeli akatsigirwa paive neG29. Saka hapana chinokutadzisa kubva pakutamba uye kuchigadzirisa nyore nyore kubva kune yako yaunofarira GNU / Linux distro.
Samsung EVO 970 Plus SSD 500GB: kubva ku € 148.99 pa € 84.99. Tenga iyo nyowani-inokurumidza solid-state hard drive kubva kune yakanakisa mhando. Iyo M.
Songmics OBG71B: chimwe chema armchair akanakisa nechimwe chezvakanakisa zvevhiki. Sevha 17% uye uitenge izvozvi chete 117.89 €. Nayo unogona kupedza maawa uchitamba kana kuita teleworking mune yakasununguka nzira, yakasununguka nzira, uye ne ergonomic dhizaini kuti musana wako usatambure. Unogona kuishandisa zvese kumba uye muhofisi, iine yakasimba robhoti, yakapfava kuchenesa, nhema nhema, chipanji chakasununguka uye chinoshingairira deformation, mavhiri, akanyarara, akatsiga, ane mawrestrests, epakati gasi chitubu kuti uchinjane nehurefu hwako, shaft 360º swivel, 135º kumashure yakatsenhama backrest, uye inokiyiwa pakona yaunoda. Uye chakanakisa pane zvese ndechekuti inosanganisira yekupeta tireyi yakavanzwa pasi pechigaro uye kuti iwe unogona kuibvisa zviri nyore kuti ugone kuisa makumbo ako mudenga munguva yako yekuzorora kana kushanda netablet kana laptop yako pamusoro mukati nzira yakasununguka kwazvo ...
Nhare mbozha uye zvishongedzo
Kana iwe uchida iyo kufamba, ipapo iwe unogona zvakare kunakidzwa neizvi zvimwe zvinopihwa zvevhiki reChishanu Chishanu. Enda kumberi kweChishanu uye usazvibvise ...
Sony Xperia 1: € 949 haingave iri mutengo wakakodzera weChishanu Chishanu, ndosaka vaine kuderedzwa kusvika ku € 489 pano, ndiko kuti, iwe ucha chengeta € 460 kuti upe kune chimwe chinhu. Uye iwe unowana imwe yeinonyanya kugadzirwa nharembozha yeSony, kutaura zvazviri, yakapihwa iyo. Smartphone ine 6.5 ″ 4K HDR OLED 21: 9 skrini, ine chipu cheQualcomm Snapdragon 855, 6GB ye RAM, 128 GB yemukati memory (inosanganisira 64GB microSD mune iri kupihwa), 12 + 12 + 12MP katatu kamera, uye imwe kumberi. Uye zvakare, ine DualSim uye Android Oreo inoshanda sisitimu. Imwe yeakanakisa nharembozha ye multimedia iwe yaunowana ...
Samsung Galaxy Buds +: kubva € 119.83 kusvika € 99 vhiki ino. Imwe yeakanakisa mafoni mahedhifoni ane akabatanidza maikorofoni, Makaralı, Ambient Ruzha uye AKG tekinoroji, anosvika maawa makumi maviri nemaviri ehupenyu hwebhatiri, isina waya kuchaja, mhando ruzha, uye yazvino uye yakasununguka dhizaini.
Belkin BoostUp: usabhadhara € 144.99, ingobhadhara 94.00 €. Iyo Qi-yakasimbiswa isina waya yekuchaja doko, USB-A yekubatanidza kune simba rekuendesa, uye kugona kuchaja Apple zvishandiso senge iyo iPhone, iPad, iWatch uye AirPods. Unogona kubhadharisa akati wandei emidziyo iyi panguva imwe chete ...
Samsung Galaxy Watch: € 329? Hapana nzira! Chete € 185 ikozvino, chengetedza € 144. Imwe yemawadhi akanakisa uye akasarudzika pamusika. Nespika yakabatana uye maikorofoni yekutaurirana pasina maoko, 1.3-inch screen, 1.5GB ye RAM, 4GB yemukati memory, GPS / Glonass, isina mvura, Bluetooth, Li-Ion bhatiri, uye kuenderana kweApple neIOS.
Sharp PS-919 Bato Mutauri: € 134.99 yaive mutengo wayo wepakutanga, ikozvino 84.99 € chete. Yakakura isina waya mutauri yekutora pati uye mimhanzi chero kwaunoda. Iine Bluetooth 5.0 tekinoroji, 3D kurira, multicolor mwenje yemafaro modhi, IPx5 inodzivirira mvura, 130W simba, uye bhatiri rakabatanidzwa rine anosvika maawa gumi nemana ekuzvimirira Kune ruzha rwakakwana, inosanganisira Super Bass mhedzisiro, 14D Yakatenderedza, uye 3 × 1 ″ woofer + 4 × 2 ″ tweeter vatauri.
Imba yakanaka (imba otomatiki)
Chekupedzisira, wese anoda we tekinoroji uye nyaradzo, Ini handikwanise kukanganwa zvimwe zvinopihwa kutonga imba yako nekuchinjisa kune iyo nguva itsva ...
Tadoº V3 +: kubva ku € 199.99 kusvika iyo 109.90 € ikozvino muvhiki ino yeChishanu Chishanu. Neiyi smart thermostat unogona kudzora tembiricha nguva dzese yekupisa kwako. Nekuisa nyore uye nerunhare mbozha. Inoenderana ne Alexa (Echo), Google Mubatsiri (Google Imba) uye Siri (Apple HomeKit).
Philips Hue: hauchazofaniri kubhadhara € 165.68 yepaki iyi, ikozvino zvinongodhura 84.99 €. Iyo pack inosanganisira 2 Philips E27 smart LED mababu (A + kugona) uye zambuko. Nezve izvi iwe unogona kudzora mwenje kusimba uye iwo mavara ayo aya mababu anogona kupa. Uye zvakare, inoenderana ne Alexa neGoogle Imba.
SmartPlug: chengetedza 10 € uye ugoitenga chete 14.99 €. Iyo soketi maunogona kubaya chero chinhu chinogadzirwa, kubva kumwenje, kune inogadzira kofi, kuburikidza nemagetsi eKisimusi, nezvimwe. Ipaki iyi chete ndiyo yakangwara uye inobvumidza zvirongwa kuburikidza neA Alexa kusarudza kuti wotanga riini chishandiso neiri nyore izwi rairo. Iyo zvakare inosanganisira Anwendung yekudzora kubva kuIOS, Android uye FireOS.
IKOHS NetBot S12: kana iwe chaunoda chiri nyaradzo uye usingafanire kuchenesa pasi futi, saka unofanirwa kutenga iyi robhoti yekutsvaira nayo ingangoita € 50 dhisikaundi, ye € 99.95 chete. Chimwe chezvinhu zvinotengesa zvakanyanya kuve 4 mu1, sezvo ichigona kudzivirira, kutsvaira, kukwenya uye kukwesha pasi. Iine yakazvimiririra uye nehungwaru system yekutenderera uye zvipingamupinyi kudzivisa, HEPA firita, uye kure kure kwehurongwa kubva mukunyaradza kwesofa.
Taurus MyCook Kubata Unlimited Edition: chengetedza zvinopfuura € 390 nechipo ichi. Robhoti yekicheni inoenda kubva ku € 890 kuenda € 499 vhiki ino chete. Imwe yemarobhoti akanakisa ekicheni neWiFi, 1600W emagetsi, 2-litre girazi kugona, tembiricha inosvika 140ºC, multifunction (shred, cook, fry, steam, chop, kufamba,…), 10 kumhanya, kurema, timer, iine zviuru gumi maresipi aripo, 10.000-nhanho steamer, yekubheka tswanda, 2 ″ ruvara kubatwa sikirini yeakawanda manzwiro mashandiro. Pakati payo repertoire yemabikirwo, iwe unowanawo ruzivo rwehutano, uyezve, iwe unogona kugadzira ako aunofarira mabikirwo nekuajairanisa neiri robhoti, haufanire kugara uchiita iwo ayo anosanganisira ... Chaizvoizvo, inosanganisira nzira mbiri dzekubika, nzira yechinyorwa yekuti iwe uende uchipinda ma parameter aunoda, uye nzira inotungamirwa kwaari kuti akuitire basa rese.
Maitiro ekuvhima machibvumirano paAmazon?
Wese munhu arikutsvaga yakanaka, yakanaka uye yakachipa chigadzirwa. Pamusoro pazvose CHAPA, uye nezvimwe munguva dzino apo dambudziko redenda iri kuuya. Naizvozvo, iwe unofanirwa kushandisa zvakanyanya mazuva ano pamberi peChishanu Chishanu, pamwe nezuva reiyo wave mafungu, uye kunyangwe ayo anouya, akadai seCyber ​​Muvhuro.
Kuziva nzira yekuvhima yakanakisa zvibvumirano kunoreva kugona kuwana kuwanda kwezvigadzirwa nezvikosheswo zvakakosha, zvibvumirano zvechokwadi izvo zvinotoreva mazana emazana ema euro mukuchengetedza pakutenga gore rino.
Kune izvi, ini ndinogovana newe mashoma tricks:
Lista: iwe unofanirwa kutora penzura nebepa uye funga nezve zvese zvaunoda, zvaunoda, kana zvipo zvaunoronga kupa vamwe. Nyora pasi zvese zvaunoda, uye nekudaro uchave neruzivo rwakajeka pane zvaunofanira kuenda. Zvinoita kunge zvakapusa, asi nenzira iyi unodzivirira kutarisisa chinhu iwe chaunofanira kutenga kunze kwekutengesa zvakanyanya kudhura.
Mazano: Amazon yakakura, ine zviuru nezviuru zvezvinhu. Kuenda kuburikidza nezvikamu zvako zvese uye zvigadzirwa zvinogona kuve rinotyisa basa. Iwe unogona kushandisa kurudziro senge iwo ari muchinyorwa chino kusvika kune iyo poindi. Zvakare, yeuka kuti paunenge uchifunga uye uchitsvaga, sosi yechigadzirwa chauri kutsvaga chingangopera. Nekuda kwezvakanaka zvakadaro zvinopihwa, ruzhinji rwevanhu vachamirira 00:00 kuti vatange kutenga kwavo kwekunyepedzera ...
Kutenga: kana iwe uchinge wajekeswa nezve chigadzirwa chaunoda, enda wakananga kunotenga chisati chapera. Iwe unotoziva kuti Amazon inokupa iwe nezvivakwa zvikuru uye inovimbisa, saka kana ukazvidemba, hazvisi izvo zvawaida, kana chinhu chacho chine imwe mhando yedambudziko, unogona kuchidzorera pasina matambudziko. Vachadzorera iyo mari yese.
Kuneta? Zvinogona kuitika, sitoko ishoma, uye kunyangwe iwe wakurumidza, zvimwe zvigadzirwa zvigadzirwa zvinogona kutotengeswa kunze nekuda kwekuwedzera kwekutengesa nekuda kwekupa. Usatombo kunetseka, pamusoro pekupenya kwekupenya kubva muvhiki yapfuura iyi, iwe uchave uine iwo eChishanu Chishanu pachawo, vhiki rinotevera, uye Cyber ​​Muvhuro ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Iwo akanakisa madhiri evhiki yeChishanu Chishanu
Linus Torvalds inoda kuti maMacs matsva neM1 aenderane neLinux